Emazantsi eNqaba - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguChristiane
Indawo ekhethekileyo enombono obalaseleyo wale ndlu ibekwe kumgangatho ophantsi wendlu yabanini. Ukuzimela ngokupheleleyo kwindawo yokupaka, uya kuba phantsi kwenqaba ekhangayo yaseCastelnau, imizuzu embalwa ukusuka ePadirac, Rocamadour, Autoire, Loubressac, Carennac.
Uya kuyithanda ingaphakathi layo elikhululekile kunye ne-air conditioning.
Ikhitshi / igumbi lokuhlala / igumbi lokutyela livuleleka kwindawo entle egqunyiweyo ngamaxesha onke, amagumbi okulala ama-2, igumbi lokuhlambela: ishawari yokuhamba, indlu yangasese eyahlukileyo, i-wifi
Kwindlu yamatye, emazantsi enqaba yaseCastelnau Bretenoux, kwidolophu yasePrudhomat, kunye nemizuzu nje embalwa ukusuka kwezona ndawo zinkulu, uya kuyixabisa le ndawo yokuhlala kungekuphela nje indawo yayo kodwa nangokuzola kwayo, umbono wayo obalaseleyo. , kwelanga yayo. kwelanga, amathayara sayo ehlotyeni ...
Siya kukuvuyela ukukwamkela apho kwaye sifuna ukuhlala kwakho kube mnandi ngokusemandleni ... Siya kuba khona ukuze siphendule imibuzo yakho kodwa siya kukwazi ukuba nobulumko ... Ndiza kukubona kungekudala, uvuyo lokuhlangana nawe.
4.95 · Izimvo eziyi-102
Indawo ekhethekileyo yale ndawo yokuhlala, emazantsi enqaba yaseCastelnau Bretenoux nakwintliziyo yesekethe yezimanga.
Inqaba enkulu, ekwidolophu yasePrudhomat, yeyona nqaba imangalisayo yamaxesha aphakathi eQuercy. Yekarhulumente kwaye inokutyelelwa unyaka wonke
Ilali edidiyelwe kwaye ikhuselweyo enembono ebalaseleyo yentlambo
Ehlotyeni, iziko lomnyhadala wobugcisa belyric eSaint Céré
Ukuba unqwenela, uncedo luqinisekisiwe kulo lonke ixesha lokuhlala
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Prudhomat